Ny Boeing 747 dia fiaramanidina amboarin'ny orinasa Boeing nanomboka ny taona 1965 fa tamin'ny 1969 ny sidina voalohany indrindra. Amin'ny hangeza, izy ny très gros porteur nandritry ny 35 taona. Ankehitriny, voasongon'ny Airbus A380 ny hangezany.
Ny 747-200 an'i Air Madagascar
Araka ny configuration sy ny karazan'ny kilasy, afaka mitondra mpandeha 366 na 524 izy. Mandeha ambanin'ny hafaingan'ny feo ny boeing 747 (Mach 0,85 eo ho eo) ary manana rayon d'action-na 13 450 km (ho an'ny 747-400), izay ny afahany manao New York tōkyō tsy aki-janona. 1 522 ny isan'ny 747 (version rehetra) efa lafo tamin'ny 30 Martsa 2008.
1.1 Ny toerana anamboarana azy
1.2 Ny fanandramana
1.3 Ny ho avy
2 Version ny 747
Ny toerana anamboarana azyHanova
Tsy nanana chaine d'assemblage anamboarana io fiaramanidina ngeza be io Boeing. Tamin'ny nanaovana ny tetikasa 747, ilaina ny manangana ozinina vaovao. Namboarin'ny tany Everett 55 km any avaratr'i Seattle (firenan'i Washington) ilay ozinina anamboarana ilay fiaramanidina. Tamin'ny Jiona 1966, nividy tany manam-pivelarana 300 hektara tany Everett ny orinasa boeing.
Namboarina mba hanamora ny fanamboarana fiaramanidina ngeza toy ny 747 ilay ozinina. 3 tapitrisa m3 ny tany nila nakisaka mba hanao nivelation.
Aloha ny fametahana azy farany, nisy fanandramana natao tamin'ny composant ny 747. Ilaina nandramana izao ohatra ny sistema « fivoahana raha misy loza » mba hamantarana ny durée d'evacuation ny mpandeha 560. Misy test tena izy efa natao fa naharitra 150 segondra ilay test kanefa 90 segondra fotsiny ny durée maximum. Sady misy volontaire maromaro naratra tamin'io fanandramana io. Ilaina nanao fanandramana maromaro vao tratra ny tanjona nokendrena. Avy tamin'ny pont ambony ny olana.
Tamin'ny 30 septambra 1968, nivoaka amin'ny chaine d'assemblage ny 747 voalohany (N7470) eo amin'ny mason'ny mpanao gazety sy eo amin'ny mason'ny solotena 26 ny compagnie aérienne. Natao tamin'ny 9 Febroary 1969 ny sidina volohany. Ny anaran'ny mpitondra dia i Jack Waddell sy Brien Wygle. Tsy nisy olana nitranga mandritry ny sidina ary tsy manana ny olan'ny « roulis hollandais » ny 747.
Ny ho avyHanova
Version ny 747Hanova
Ny 747-400 an'i Qantas
Ny 747-100 dia fiaramanidina 747 voalohany indrindra, navoaka tamin'ny chaine de montage ny Everett (ozinina ngeza indrindra namboarina) ho an'ny sidina voalohany tamin'ny 9 Febroary 1969, ary nahazo certification natao tamin'ny Desambra 1969. Nanomboka niasa ny 747-100 tamin'ny Janoary 1970, ny Pan American World Airways ny nampiasa ny mpanjifan'i Boeing voalohany. Ny 747-100 dia manana rayon d'action-na 9 000 km. Ny fiaramanidina 747-100 farany natao dia novidian'ny Japan Airlines tamin'ny Septambra 1986.
Natao tamin'ny 1972, manana turboreacteur matanjaka ny 747-200, ary mbola ambony nohon'ny 747-100 ny lanja ara-drafiny. Betsaka kokoa ny solika azony entina ary afaka manidina elaela kokoa nohon'ny 747-100 izy.
Tsy vokarina intsony ny 747-400 mpitondra olona amin'izao fotoana. Efa nosoloina ny 747-8 izy.
Misy karazany maro ny 747-400: ao ny mpitatitra entana 747-400F, ao ny sady mpitondra olona no mitondra entana 747-400M.Ny 747-400ER ( Extended Range ) dia natao indrindra ho an'ny fitaterana lavitra. Mpitondra entana moa no tena nanaovana azy ity.
↑ ((en)) Boeing 747-400 Program Milestones, The Boeing Company. Novangiana tamin'ny 21 Septambra 2005
↑ Irving, pejy310.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_747&oldid=773489"
Dernière modification le 22 Oktobra 2015, à 00:54
Voaova farany tamin'ny 22 Oktobra 2015 amin'ny 00:54 ity pejy ity.